ikhaya AMANQAKU E-FOOTBALL AMAZWE Abadlali bebhola ekhatywayo abangamaNgesi I-Leighton Baines Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo le-backback ethembekileyo ekhohlo eyaziwayo ngegama; "'IDuke". Ibali lethu leLeighton Baines Childhood kunye ne-Untold Biography Facts ikuleta i-akhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lokuzalwa kwakhe. Uhlalutyo luquka ibali lobomi bakhe phambi kobuqili, ubomi bentsapho kunye ne-OFF kunye ne-ON-Pitch engaziwayo ngaye.
Ewe nguyo eyaziwa kakhulu ngenxa yobugcisa bakhe kunye nezohlwayo. Nangona kunjalo, kuphela isandla esincinane sabalandeli abazi kakhulu ngeLeighton Baines Bio enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokunye okunye, masiqale.
I-Leighton Baines Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Obomi bakwangoko
ULeighton uJohn Baines wazalwa ngo-11th Disemba 1984 eKirkby, eUnited Kingdom kuMnu noNksz John Baines. Wazalelwa ngeSagittarius.
Ekhuliswe eKirkby, eMerseyside, eBaines yafundiswa kwiSt Joseph I-Worker Catholic Primary School. Isikolo saseprayimari sasekuhlaleni saseLiverpool samnika ithuba lokudlala umdlalo webhola ekhatywayo ngexesha lezemidlalo. Emva kokubona izithembiso zakudala emsebenzini wakhe, abazali bakhe banquma ukwenza ukuba unyana wabo ajoyine ibhola lebhola lebhola yecawa eyayiqhutywe yinto evelele ngeeveki zeLeighton Baines.
Nceda qaphela: Iqonga lebhola yecawa yeCawa yikota e-United Kingdom ukuchaza iqumrhu lebhola lebhola lebhola edlala ngeCawa, ngokuchasene noMgqibelo oqhelekileyo.
Ngeminyaka eyi-10 naphezu kokujoyina ibhola lebhola njengomntwana othembisayo, umcimbi omnye uhleli. ULeighton Baines wayengumntwana oyintloni kunye no-introverted. Ukuba neentloni kwenza ukuba abe nemiphumo emibi kakhulu eyenza ukuba angabi nabanye abantwana njengezihlobo. Ngombulelo, abazali bakhe nabafundisi besikolo bamnceda ukuba anqobe untloni. Oku kwavutha umdla wokuba ngumdlali webhola.
I-Leighton Baines Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ukunyuka Kwigama
Ukhetho lwe-Leighton Baines lufana nolunye u-Everton kunoLiverpool njengoko wadideka ngumdla e-Everton. Njengoko wayekade etshela i-Guardian;
Ndandiselula. Ndilahlekelwe ngumdla kwiLiverpool, kodwa ndandisithanda ukubukela ibhola. Ndaye kwi-1995 FA Cup ekupheleni kwe-9 xa u-Everton axabela iManchester United 1-0. Le nto yayiye xa ndiqala ukubuka u-Everton ngokufanelekileyo.
Umama wakhe akayi kuvumela ukuba ndihambe ndiseBonison Park. Uya kufaka umzala wam oneminyaka emithathu mdala kunami ukukhokela. Sifumana ibhasi, i-50p esuka eKirkby, size sixhomeke ngaphandle ngaphandle kokuba singene ngaphakathi. Silinda de bavule amasango emva kwemizuzu ye-75 ibe ngumdlalo wabadlali bokuqala.
Kwakukho abaphathi phezu kwamasango kwaye ukuba babesenomdla, bazama ukungena. Umntu omnye, ngokukhethekileyo, wasetyenzela. Kodwa ngamanye amaxesha, ukuba sasingenangqungquthela, bekuza kuba ne-jobsworth emnyango kwaye asiyi kubona into. "
Njengomntwana okhulile kakhulu, uBaines unqabile ukuhlazeka kwakhe emva kokufumana ubuninzi kunye nehlabathi langaphandle kunye nokungenelela kubazali bakhe nootitshala njengoko kuchaziwe ngaphambili. Waqhubeka edlala iqela leCawa ngeliqela elibizwa ngeendlela eziphambili kunye nabaqeqeshi bexesha elizayo Ryan Taylor (ophelile eNewcastle) kunye UDavid Nugent (EPortsmouth naseLeicester, phakathi kwabanye).
Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba uLieighton Baines waphumelela kwiCawa yeLawa kwaye wabizwa nguWeverton. Emva kokuya kwiimvavanyo, wamukelwa ngenxenye kwisikolo. Kwenye indlela yokuqinisekisa kunye neqela, iBaines iyanqatshelwa kwi-Academy. Olunye ulingo lwaseWigan luphumelele. Wahlala eWigan kwaze kwaba yi-2002 xa ephakanyiswe kwiqela labo eliphezulu. AmaBhaya adlala kwimida kunye nokuhlaselwa; Kwakuba kuphela xa eqala umsebenzi wakhe ophezulu eWigan ukuba waqala ukudlala kwindawo ekhohlo.
Ngokumangalisayo, uLiverpool wakhetha ukuba ahambe ekhohlo njengoko bebanomdla kuye. Emva kokuva oko, uBaines waba nomuzwa wokuthi kwakuphela ukuphela kwehlabathi kwaye wayethuthunyiswa nguWeverton. Wamkela iWeverton emva kokunyaniseka okukhulu kwaye uxolisa kunye nokuzama ukuhlala kufuphi nabazali bakhe. Bonke abanye, njengoko besoloko bethetha, ngoku iimbali.
I-Leighton Baines Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ulwalamano lobomi
Ngaphambi kwamadoda onke amakhulu, kukho umfazi omkhulu, okanye oko kuthetha. Kwaye phantse i-England yonke ibhola yebhola, kukho umfazi othakazelisayo okanye intombi.
Njenge Toby Alderweireld, UBaines waqala ulwalamano lwakhe kwindawo yokudlala ebuntwaneni bakhe obumnandi benoRachel. Ulwalamano lwabo lwalususa kwi-bestie isimo sothando lwenene. Baines kamva ekhumbula ukuba enye yezinto zakhe zokukhumbula ezincinci ezazingumntwana ezazivakalisa uRaheli uthando lwakhe kwaye zikholelwa ukuba ziza kutshata ngolunye usuku olwenzekayo.
Kwi-2009, uLeighton Baines watshata noRakeli emcimbini wemfihlo. Esi sibini sinezingane ze-3 kunye nomntu wokuqala ozalwa xa uLeighton engumdala we-18 ubudala. Ngezantsi umfanekiso weentaka zeBaines, okwesibini ukusuka kwesobunxele.
U-Rachael ungomnye wabanye abafazi base-Evertonia kunye nentombi intombi ezithembisa imali yomyeni wakhe ekuncedeni ukunyusa imali yeeNkampu zeCanscer Breast.
I-Leighton Baines Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi bomntu
ULeighton unomdla kwaye unamandla. Ingqondo yakhe evulekile kunye nengqiqo yefilosofi iyamkhuthaza ukuba ahlale ekhangela kwaye ajikeleze ngenjongo yokwenene yobomi. Uyaziqhenya, unethemba kwaye unomdla, kwaye uyakuthanda utshintsho. Baines uyakwazi ukuguqula iingcamango zakhe kwizenzo ezizenzekelayo kwaye uya kwenza nantoni na ukuphumeza iinjongo zakhe.
Amandla eLeighton Baines: I-Leighton Baines inomusa, iinjongo kwaye inomdla kakhulu.
Leighton Baines Ubuthakathaka: Uza kuthetha nantoni na kungakhathaliseki ukuba unxibelelwano.
Yintoni uLeeighton Baines ayithandayo: Inkululeko, ukuhamba, ifilosofi nokuhlala ngaphandle nomhlobo wakhe osondeleyo, Miles Kane.
Yiyiphi iLeighton Baines ayithandiyo: Abantu be-Clingy, bekunqunywe, iingcamango ezingekho kwidonga, iinkcukacha.
I-Leighton Baines Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts -Ubomi Bentsapho
I-Leighton ivela kwimvelaphi yentsapho ephakathi. Ngesinye isikhathi, abazali bakhe bebengekho isisityebi esaneleyo sokufumana ithikithi epheleleyo ye-Everton. Abazange bakwazi ukuthenga ithikithi enye ye-Everton yonyana wabo uLeighton. Obabini kunye nomama wabuya bavumela unyana wabo kunye nomntakwabo ukuba alinde ngaphandle kweGoodison Park ukuze avule amasango okuphuma. Iimviwo ezilishumi ezixabisekileyo!
Kuyafaneleka ukuba uqaphele ukuba wonke umntu osentsapho yakhe kuquka izihlobo zakhe ziba liverpool okanye i-Evertonian fan. AmaBhaya asele e-Everton ixesha elide ngenxa yabazali bakhe abathandayo abathanda ukuhlala besondelene nendodana yabo.
U-Baines uye wachaza indlela abazali bakhe bema ngayo emva kokuxatyiswa ngu-Everton ukwenqaba ukumfaka esikolweni. Ngamazwi akhe
"Ndafika ekhaya ngaloo mini ndaza ndacinga ukuba kunjalo. Ukuxelelwa ukuba andizange ndanele ngokwaneleyo kwaba ngumsindo omkhulu. Ukusuka apho ndaya eWolves ndadlala umdlalo wokulinganisa.
Emva kweminyaka embalwa, u-Everton wavuya naye kwaye wayefuna ukuba abuyele. Indawo yaba lula kubazali bam, ke apho ndaya khona nalapho ndahlala khona ".
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda iLeighton Baines Childhood Indaba kunye neengxelo ezingezizo. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ubona into engabonakali kakuhle kweli nqaku, nceda ubeke ingxelo yakho okanye uxhumane nathi!
UScott McTominay Ibali leBantwana leNdaba yeNgxelo ye-Untold Biography Facts